IPlatinam blonde emntwini | Amadoda aQinisekileyo
IPlatinam blonde emadodeni
Kwiminyaka eliqela eyadlulayo kwayeIplatinum blonde yaqala ukuthatha indawo yamadoda. Cwangcisa umkhwa kwaye babengoosaziwayo ababekhuthaza ifashoni yakhe, njengoJustin Bieber, uZac Efron okanye uColton Haynes. Iziphumo zikumboniso, kodwa ukuzama ukwenza iinwele zakho ukuba zifikelele kule thoni kuya kufuneka uyazi ukuba ayingomsebenzi ulula.
Iplatinum blonde Inalo ithoni ekhanyayo blonde, i-platinum blonde kunye nento ebizwa ngokuba yitoni ye-10. ithoni yothuthu. Ukufumana lo mbala kuya kufuneka wenze i-bleaching eninzi esichaza apha ngezantsi.
1 Inkqubo yokwenza iblatin blonde
2 Imilo kunye nezitayile zokunxiba i-platinum blonde
3 Unonophelo olukhethekileyo lweenwele zeplatinam yamadoda
Inkqubo yokwenza iblatin blonde
Nokuba uneenwele ezimfutshane okanye ezinde, kufuneka wenze u inkqubo ende ende. Kwifoto yokuqala, inkqubo iya kuthathwa, kodwa okuninzi kuya kufuneka. Kwiimeko ezininzi, ukuya kuthi ga kwi-4 yokuchithwa kweempawu ezingama-50 iperoksayidi kwaye inokuthatha iintsuku okanye iiveki.
Le nkqubo Ukohlwaya kakhulu iinwele, ke kuya kufuneka ube neenwele ezomeleleyo nezomeleleyo. Indlela yakhe kukususa i-melamine yendalo ezinweleni ukuze icace. Izinwele zimnyama, kokukhona kuya kufuneka unxibe ngakumbi umbala. Emva koko qhubeka unike idayi ukuba uyifumane loo mthi weplatinum blonde.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: imveliso ye-bleaching, umtya weenwele ezimhlophe zeplatinum, kunye nedayi yombala weenwele.
Njengokubaluleka kufuneka vavanya ukuba iinwele zakho zinokumelana na Iplatinum blonde. Umenzi wesitayile unokunika iingcebiso ezicacileyo malunga nokuba zinjani iinwele zakho, ukuba zingaphi ii-bleach ezifunekayo kwaye ukuba ingaziphatha. Eli nyathelo libalulekile njengoko unokuba semngciphekweni wokudala iinwele ezinobunzima kunye nobuthathaka kakhulu.
Imilo kunye nezitayile zokunxiba i-platinum blonde
Ukuba injongo yakho kukufezekisa i-platinum blonde, kuya kufuneka wazi ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo ezinokukunika umdla, kuba ukuba ufuna iinwele ezikhethekileyo okanye unentshebe, mhlawumbi iseti yezi zinto zoncedo iya kudala amathandabuzo.
Indoda enesilevu Olu hlobo lweenwele lukhangeleka lukhulu. Uyakumangaliswa kukubona indlela umbala weendevu ohluke ngayo kumbala weenwele. Nangona kunjalo, lo mahluko ucacile kwaye ujongeka umhle nge iinwele ezilula okanye ngeenwele Ngaphantsi.
Izinwele ezisongekileyo Ikwayinto elungileyo, amanye amadoda alinga ukuba neplatinikhi blonde neenwele ezigobileyo, ziqokelelwe phezulu kwaye zisikiwe kumacala entloko kwaye oko kubonisa omnye umbala. Kule ndlela ikwadityaniswa nentshebe enkulu engqindilili kwaye engenabala.
Enye indlela ukunxiba iinwele ukuya Uhlobo lweDreadlocks luhlobo olusetyenziswa kakhulu. Kuya kufuneka ushiye isitayile sakho se-grunge kwaye ungabi naxhala lokuba neenwele ezineengcambu eziphindwe kakuhle. Kodwa kwimo yayo echaseneyo sinokufumana i- iinwele ezichetyiweyo ngokupheleleyo Kwaye ngale thoni, iya kuhlala kamnandi kwaye intsha, kodwa ukuchukumisa kufuneka kube rhoqo.
Unonophelo olukhethekileyo lweenwele zeplatinam yamadoda
Iinwele xa zicinyiwe zifuna ukhathalelo olukhethekileyo kunyango lwazo. Kufuneka ujolise kunyango lwakho ekwenziweni ubume be capillary ayigqibi ukonakalisa kwaye umbala hlala njengosuku lokuqala elide kangangoko kunokwenzeka.
Iinwele azinakuhlanjwa ngeshampu yesiko, nangona zikhethekile kwinwele ezonakeleyo. Kukho iimveliso ezikhethekileyo zolu hlobo lokubala, ayinasulphate, inezakha mzimba ezikhethekileyo kunye nee-pigment ezimfusa Ukuqinisekisa ukuba ezi thowuni zesilivere azipheli.
Imigqaliselo Kwakhona kubalulekile ekunyamekeleni kwabo, bashiya ukugqitywa kwamanzi kunye nokunciphisa amathoni aphuzi. Azinazo iiparabens kunye nesulphate ukuze zingonakalisi kwaphela iinwele.
Iimaski Kananjalo lukhetho oluhle kakhulu, zigcina ukubukeka okupholileyo kwaye zinombala omfusa ukugcina ithoni yombala ezinweleni. Izithako zalo zikhethwe ukuba phatha kwaye uqinise iinwele ezomileyo nezonakalisiweyo.
Iingcambu zokuchukumisa kufanelekile ukulinganiswa. Kuya kufuneka ugcine iinwele zakho kwaye yenza i-retouch ngexesha. Akulunganga ukushiya iingcambu zigqithile ukuthintela iinwele ekubeni ziphele kunye nolo jongo lutshileyo. Mhla udiniwe ngumbala, kufuneka uvumele iinwele zakho zikhule kwaye ngokuthe ngcembe usike yonke into edayiweyo.
Izinwele ezingwevu emntwini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » IPlatinam blonde emadodeni